Ra’iisul wasaaraha oo maanta wasiiradiisa cusub horgeynaya xildhibaanada baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaaraha oo maanta wasiiradiisa cusub horgeynaya xildhibaanada baarlamaanka
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta golahiisa wasiirada cusub horgeyn doonno xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed Maxmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyey in dhammaan wasiirada la horgeyn doonno maanta golaha shacabka.
Sidoo kale, xidhibaanka ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha uu soo bandhigi doonno ajendaha xukuumadiisa, wuxuuna xildhibaanada ka dalban doonnaa inay codka kalsoonida ah siiyaan wasiiradiisa cusub, maadaama howlo culus ay u sugayaan.
Xildhibaano gaarayey 105 ayaa diidanaa meel-marinta xukuumadda ra’iisul wasaare Kheyre, waxayna ka dalbadeen inuu dib uga laabto xukuumadaan, balse dadaalo badan oo la sameeyay ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la xalliyo tabashadda xildhibaanadaas.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa haatan u muuqda mid haysta kalsooni badan, maadaama uu ku dhiiranayo in isaga oo loo digey uu hadanne xukuumaddiisa horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.